တချိန်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ လူတွေကြုံတွေနေရတဲ့ စကားလေးတွေစုဝေးရာ
သစ်ထူးလွင် ဓားပြခြောက်လှန့်ကာ လုယက်သူများ ဖမ်းမိ အီတလီကျောင်းကားမီးလောင်ပြီး ၁၆ ဦးသေ ရှမ်းမြောက်ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ ရှမ်းမြောက်နဲ့ တပ်မတော် တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ် ဂျာမဏီမှာ ဥရောပ အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်တွေစု ရခိုင်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေတဲ့ ဒေသတွေအရေး ဗြိတိန်ဝန်ကြီး ပြော အိုအိုင်စီအထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပမှုအပေါ် မြန်မာအစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန် ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ရှိ ဈေးတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား၊ လူ ၂၀ ဦး သေဆုံး၊ ၃၀ ဦး ဒဏ်ရာရ ယူကေမှာ ထရမ့်ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသမီးတွေ သောင်းနဲ့ချီ ဆန္ဒပြ ထရမ့်က အိုဘားမားလုပ်ခဲ့တာတွေ စပြောင်း ​တောင်​ငူတွင်​ ယ​နေ့နံနက်​ ၉ နာရီခန့်​က ​ဘုန်းကြီး​ကျောင်း တခု၌ ဓားပြတိုက်​မှုဖြစ်​ပွား​ မော်လမြိုင် နောင်ခရီရပ် စိတ်မနှံ့သူ ရှို့တဲ့ မီးလောင်မှု လူတစ်ဦးသေဆုံး ပုဂံညောင်ဦးမှ ဘုရားဖူးပြန်လာသော HIACE ကားတစ်စီး ဘီးပေါက်ပြီး မီးလောင် ရှစ်ဦးသေဆုံး တစ်ဦးဒဏ်ရာရ အမြန်လမ်းပေါ်၌ ပုဂံဘုရားဖူးယာဉ် မီးလောင်ပြီး ၈ဦးသေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူ ၁၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီး ကျောင်းဆရာ ဈာပန လူပေါင်း ငါးထောင်ပို့ သီပေါမြို့နယ် လက်ဖက်ခြံတစ်ခုတွင် မိုင်းကွဲ၍ အသက် ၂၀ အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကွယ်လွန်၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာမှ လူ(၅)ဦးသေဆုံး မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် အစေးမကပ်သော ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များအလားအလာ မကောင်း ဟု မုံရွာရောက် ဦးဝင်းထိန် သတိပေး မန်လွယ်ရွာ လက်ဖက်ခင်းတွင် မိုင်းနင်းမိ၍ တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ မိုင်းယုတွင် လက်နှစ်ဖက် နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်၍ အသတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသားအလောင်းတွေ့ရှိ သီပေါမြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ယာဉ်နှစ်စီး ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှ နှစ်ဦးသေ၊ လေးဦး ဒဏ်ရာရ လူ ၅ ဦးသေ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ ၊ ငွေကျပ် ၉၇သိန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် တ/ဒဂုံမှ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် တောင်ဒဂုံမြို့ နယ် ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် ငါးဦးသေ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ (ဓါတ်ပုံများအား နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ထိတ်လန့် တက်သူများ မကြည့်ရ) ဂမ်ဘီယာ သမ္မတ အာဏာလွှဲပေးဖို့ သဘောတူ ဓားပြခြောက်လှန့်ကာ လုယက်သူများ ဖမ်းမိ Posted: 21 Jan 2017 07:45 AM PST လုယက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိထားသူ ၄ ဦးကို စစ်ဆေးရာမှ လုယက်မှုများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အပြင် လုယက်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အတူပါဝင်သူ ၂ ဦးကိုပါ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ အရေးယူ ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ၁၂.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၂၃၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာသူ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဓားပြခြောက်လှန့်ကာ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်အား လုယက်သွားသူ လူငယ် (၄)ဦးကို ပြည်သူများနှင့် ကမာရွ အီတလီကျောင်းကားမီးလောင်ပြီး ၁၆ ဦးသေ Posted: 21 Jan 2017 07:00 AM PST Budapast မြို့ ကကျောင်းရှေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းညှို။ ၂၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇။ အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ ဘတ်စ်ကားတစင်း မီလောင်ခဲ့တာကြောင့် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ လူငယ်ကျောင်းသား ၁၆ ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ အီတလီသတင်းမီဒီယာတွေက စနေနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံက ကျောင်းသားအများစုကို တင်ဆောင်လာတဲ့ အဲဒီဘတ်စ်ကားဟာ သောကြာညသန်းခေါင်မတိုင်ခင် ဗီရိုနာမြို့နားမှာ တံတားအော ရှမ်းမြောက်ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ Posted: 21 Jan 2017 06:58 AM PST TNLA တပ်သားများ ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာ အပစ်မရပ်ရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေက ဒီကနေ့မှာ ဆက်ပြင်းထန်နေဆဲပဲလို့ TNLA တအောင်းတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖော်ဆောင်လိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး စစ်ပွဲတွေကို အမြန်ဆုံးရပ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ နိုင် ရှမ်းမြောက်နဲ့ တပ်မတော် တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ် Posted: 21 Jan 2017 06:56 AM PST NCA စာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထိုးခဲ့တဲ့ ရှမ်းမြောက်အဖွဲ့ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSPP/SSA ) နဲ့ မြန်မာ တပ်တော်ကြား စနေနေ့မှာ တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မိုင်းရှူး မြို့နယ်ထဲက တောင်ကုန်းတွေမှာ တစ်နာရီ ကျော်ကြာ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘိန်းခင်းတွေ ဖျက်ဆီးဖို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ SSPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကို တပ်မတော်က ဝင်လာတဲ့ ဂျာမဏီမှာ ဥရောပ အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်တွေစု Posted: 21 Jan 2017 06:56 AM PST ဗြိတိန်နိုင်ငံက အီးယူက နုတ်ထွက်ဖို့ လုပ်နေပြီး ပြည်တွင်းရေး ဦးစားပေးတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတသစ်လည်း တက်လာခဲ့တဲ့အတွက် ဥရောပက ဘက်က အမျိုးသားရေးဝါဒီ ပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိလာ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားတပ်ဦး ပါတီ ခေါင်းဆောင် မရင်း လပန်းက အမျိုးသားရေးဝါဒ ခေါင်းထောင်လာတာကို ကြိုဆိုတယ်လို့ ဂျာမနီက အစည်းအဝေးတခုမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြဖို့ရှိနေတဲ့ ဥရောပက အမျိုး ရခိုင်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေတဲ့ ဒေသတွေအရေး ဗြိတိန်ဝန်ကြီး ပြော Posted: 21 Jan 2017 06:55 AM PST ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို လေ့လာစဉ်။ Photo: Kaung Htet Kyaw/RFA ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson ဟာ ရခိုင်အရေးနဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပူပန်မိကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ အိုအိုင်စီအထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပမှုအပေါ် မြန်မာအစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန် Posted: 21 Jan 2017 06:53 AM PST မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က တက်ရောက်လာသူတွေကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Organisation of Islamic Cooperation (OIC) မလိုလားအပ်တဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာဟာ ပြဿနာကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ ကို ဆွေးနွေးဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အိုအိုင်စီအထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက် ပြီး မြန်မာနို ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ရှိ ဈေးတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား၊ လူ ၂၀ ဦး သေဆုံး၊ ၃၀ ဦး ဒဏ်ရာရ Posted: 21 Jan 2017 06:45 AM PST ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး ဈေး ပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူများအား တွေ့ရစဉ် အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Kurram မျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်သည့် နယ်မြေအတွင်းရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး ဈေး တစ်ခု၌ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၀ သေဆုံးပြီး လူ ၃၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူ ယူကေမှာ ထရမ့်ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသမီးတွေ သောင်းနဲ့ချီ ဆန္ဒပြ Posted: 21 Jan 2017 06:45 AM PST လန်ဒန်က ထရမ့်ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသမီး ချီတက်ပွဲ အမေရိကန် သမ္မတ နေရာကို ဒေါ်နယ်ထရမ့် ရောက်လာပြီး နောက်တစ်ရက် မှာပဲ ထရမ့် ဆန့်ကျင်ရေး နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှု တွေ ပေါ်ပေါက် လာတာမှာ ယူကေ တနံတလျားက မြို့ကြီး တွေမှာလည်း ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပြုလုပ် လာပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာ လူပေါင်း နှစ်သိန်း လောက်ထိ ပါဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး ချီတက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ထပ်တူ သွေးစည်း ညီညွတ်ကြောင်း ပြသ ထရမ့်က အိုဘားမားလုပ်ခဲ့တာတွေ စပြောင်း Posted: 21 Jan 2017 06:43 AM PST အများဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့ ဒီဥပဒေကို မစ္စတာ ထရမ့်ဟာ မဲဆွယ် ကာလမှာ ကတည်းက ဖျက်သိမ်း အစားထိုးမယ်လို့ စည်းရုံးထားခဲ့ဖူး အမေရိကန်သမ္မတသစ်ဖြစ်လာတဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က Obamacare လို့ခေါ်တဲ့ ယခင် သက်သာကျန်းမာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ အမိန့်ကို သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ရုံးအမိန့်အဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အများဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့ ဒီဥပဒေကို မစ္စတာ ထရမ့်ဟာ မဲဆွယ် ကာလမှာ ကတည်းက ဖျက်သိမ်း အစားထိုးမယ်လို့ စည်းရုံးထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ​တောင်​ငူတွင်​ ယ​နေ့နံနက်​ ၉ နာရီခန့်​က ​ဘုန်းကြီး​ကျောင်း တခု၌ ဓားပြတိုက်​မှုဖြစ်​ပွား​ Posted: 21 Jan 2017 01:17 AM PST ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့တွင် ယ​နေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က (၆) ရပ်ကွက် မြတောင်ကျောင်းတိုက်မှ သက်တော် ၈၅ နှစ်၊ဝါတော် ၆၅ ဝါရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် တစ်ဦးထဲရှိနေစဉ် လူနှစ်ဦးခန့်မှ ဓားပြတိုက်​အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဆရာတော်၏ ဦးခေါင်းနောက် စေ့နားတွင် တစ်လက်မခွဲခန့်ရှိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ ကားငယ်တစ်စီးနှင့် ကျောင်းတိုက် အပေါ်ခန်းများခတ်သည့် မော်လမြိုင် နောင်ခရီရပ် စိတ်မနှံ့သူ ရှို့တဲ့ မီးလောင်မှု လူတစ်ဦးသေဆုံး Posted: 21 Jan 2017 01:06 AM PST မော်လမြိုင်မြို့ နောင်ခရီ အောင်မင်္ဂလာ (၁) ရပ် ၂ လမ်း အိမ်အမှတ် (၁၈) ဦးငွေဝင်း (၇၆) ဆိုသူ၏ နေအိမ်တွင် ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၁ မွန်းလွဲ ၁၃:၁၅ အချိန်မှ စ၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မော်လမြိုင်ခရိုင်မီးသတ် မြို့နယ်မီးသတ် မြိုင်သာယာမီးသတ် အရံမီးသတ်တို့မှ မီးသတ်ကား ၈ စီး၊ မော်လမြိုင် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးဦးစီး မြို့ပေါ်စခန်း ၆ ခုမှ စခမများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မော်လမြိုင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ နယ်ခြေခံတ ပုဂံညောင်ဦးမှ ဘုရားဖူးပြန်လာသော HIACE ကားတစ်စီး ဘီးပေါက်ပြီး မီးလောင် ရှစ်ဦးသေဆုံး တစ်ဦးဒဏ်ရာရ Posted: 21 Jan 2017 12:53 AM PST ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ပုဂံညောင်ဦးမှ ဘုရားဖူးပြန်လာသော HIACE ကားတစ်စီး ဘီးပေါက်ပြီး မီးလောင်သောကြောင့် ရှစ်ဦးသေဆုံးက တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမှတ် ၃လမ်းဆုံ အမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်း ထံကသိရသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်က ရန်ကုန် မန္တလေးအမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၄/၁ နှင့် ၄/၂ အကြား၌ နေပြည်တော်ဘက်မှ ရန်ကုန်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဝင်းထွန်း မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် 9H/7167 အမြန်လမ်းပေါ်၌ ပုဂံဘုရားဖူးယာဉ် မီးလောင်ပြီး ၈ဦးသေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ Posted: 21 Jan 2017 12:24 AM PST ယနေ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အမှတ် ၄မိုင် ၁ဖာလုံ နှင့် ၂ဖာလုံ ကြားတွင် မီးလောင်ကျွမ်းသော ကားအား မီးငြိမ်းသတ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မီးသတ်ဦးစီးဌာန) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အမှတ် ၄မိုင် ၁ဖာလုံ နှင့် ၂ဖာလုံ ကြားတွင် ယနေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် ပုဂံဘုရားဖူးယာဉ် မီးလောင်ပြီး ၈ဦးသေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားသ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူ ၁၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီး Posted: 21 Jan 2017 12:16 AM PST ဝါရှင်တန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတသစ်အဖြစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဝါရှင်တန်မြို့၌ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဆန္ဒပြသူ ၉၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ Capitol အဆောက်အအုံ၌ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်ပြီးနောက် အိမ်ဖြူတော် အနီးတွင် ဆန္ဒပြသူများက ပြတင်းပေါက်များ ရိုက် ကျောင်းဆရာ ဈာပန လူပေါင်း ငါးထောင်ပို့ Posted: 21 Jan 2017 12:13 AM PST ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် နမ့်မဖြစ်ရွာမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဦးအောင်ဇင်ထွန်းရဲ့ ဈာပနကို ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် နမ့်မဖြစ်ရွာ အလယ်တန်းကျောင်းက သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ ဆရာ ဦးအောင်ဇင်ထွန်းရဲ့ ဈာပနကို ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူ ငါးထောင် ဝန်းကျင် ဒီကနေ့ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ဦးအောင်ဇင်ထွန်းရဲ့ အသုဘကို လိုက်ပါပို့ေ သီပေါမြို့နယ် လက်ဖက်ခြံတစ်ခုတွင် မိုင်းကွဲ၍ အသက် ၂၀ အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကွယ်လွန်၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ Posted: 21 Jan 2017 12:06 AM PST သီပေါ ၊ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ။ ယနေ့ ၂၁- ၁ -၂၀၁၇ ရက်၊ မနက် ၈ နာရီခန့်က၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊သီပေါမြို့၊ အနောက်ဘက် မိုင် ၂၀ ခန့်အကွာ၊မန်လွယ်ကျေးရွာ၊လက်ဖက်ခြံတစ်ခုတွင် "ထောင် "မိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည့်အတွက် အသက် ၂၀ နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသေဆုံးပြီး၊ အသက် ၁၃ နှစ် နှင့် ၁၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သီပေါမြို့မရဲစခန်းမှ ခေတ္တစခန်းမှူးရဲအုပ်ဌေးလွင်ကပြောကြောင်း သီပေါဆေးရုံတွ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာမှ လူ(၅)ဦးသေဆုံး Posted: 20 Jan 2017 11:39 PM PST ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊ မောင်းမကန်လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်း ထောင့်ရှိ ဦးဖေဟန်ပိုင်ဆိုင်သော အကွီစားသောက်ဆိုင်မှ ယနေ့နံနက် (၄း၃၅)အချိန်ခန့်တွင် မီးလောင်မှုစ တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အနေဖြင့် စားသောက်ဆိုင်အတွင်းရှိ မီးကျွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် ဂတ်စ်အိုးမှ စိမ့်ထွက်နေသည့် ဂတ်စ်များနှင့်ထိတွေ့ပြီး မီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွား မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် အစေးမကပ်သော ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များအလားအလာ မကောင်း ဟု မုံရွာရောက် ဦးဝင်းထိန် သတိပေး Posted: 20 Jan 2017 11:29 PM PST ဓာတ်ပုံ- NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းထိန်နှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်တို့အားတွေ့ရစဉ် မုံရွာ၊ ဇန်န၀ါရီ-၂၁ NLDပါတီ မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များနှင့် အစေးမကပ် သော ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်အမတ် များ အလားအလာ မ ကောင်းနိုင်ဟု မုံရွာမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော အမျုိးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဗဟို အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က သတိပေး ပြောကြားလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသ မန်လွယ်ရွာ လက်ဖက်ခင်းတွင် မိုင်းနင်းမိ၍ တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ Posted: 20 Jan 2017 11:29 PM PST ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် အုံမုအထက်ပိုင်း မန်လွယ်ကျေးရွာ လက်ဖက်စိုက်ခင်းတစ်ခုတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က မိုင်းနင်းမိပြီးပေါက်ကွဲသဖြင့် အမျိုးသမီး (၃)ဦးဒဏ်ရာရသည့်အနက် တစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဒဏ်ရာရသူ(၃)ဦးအား သီပေါမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ် မိုင်းနင်းမိသူအမျိုးသမီးမှာ လမ်းတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ "ဒီမနက် ၇ နာရီခွဲလောက်မှာ လက်ဖက်ခြံထဲ မိုင်းယုတွင် လက်နှစ်ဖက် နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်၍ အသတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသားအလောင်းတွေ့ရှိ Posted: 20 Jan 2017 11:25 PM PST ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယုမြို့၊ ကျိုင်းကုန်းအုပ်စု ဇိအုန်ကျေးရွာအနီး ဝမ်ခိုးချောင်းနံဘေးတွင် လက်နှစ်ဖက် နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်၍ အသတ်ခံထားရသည့် အလောင်းတစ်လောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် သေဆုံးသူအား အတည်ပြုနိုင်ရေးနှင့် တရားခံဖမ်းမိရေးအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။ ဇိအုန်ရွာသူကြီး ဦးလင်ရှီးက ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက် ညနေ လေးနာရီခွဲဝန်းကျင်က မိုင်းယုနယ်မြေ ရဲစခန်းသို့ ဖုန်းဖြင့် အြေ သီပေါမြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ယာဉ်နှစ်စီး ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှ နှစ်ဦးသေ၊ လေးဦး ဒဏ်ရာရ Posted: 20 Jan 2017 11:14 PM PST ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ယာဉ် နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှ နှစ်ဦးသေဆုံးကာ လေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သီပေါယာဉ်ထိန်းရုံးမှ သိရှိရသည်။ သီပေါမြို့နယ်၊ ပန်စောက်မိန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီး မန္တလေး-လားရှိုးသွား ပြည်ထောင်စုလမ်း မကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၃၁/၅-၆ အကြားတွင် ခမ်းခုံးဆိုသူမောင်းလာသည့်(၂၂)ဘီးတွဲယာ လူ ၅ ဦးသေ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ ၊ ငွေကျပ် ၉၇သိန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် တ/ဒဂုံမှ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် Posted: 20 Jan 2017 11:10 PM PST ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း ၁၈ရပ်ကွက်၊ မောင်းမကန်လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်းထောင့်ရှိ အကွီ(၁) စားသောက်ဆိုင်တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူ ၅ ဦးသေ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ ငွေကျပ် ၉၇သိန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဌာန (ဗဟို) မှသိရသည်။ ယင်းစားသောက်ဆိုင် ချက်ပြုတ်ခန်းအတွင်းရှိ ဂက်စ်အိုး ယိုစိမ့် ပျံ့နှံ့ရာမှ မီးကြွင်းမီးကျ တောင်ဒဂုံမြို့ နယ် ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် ငါးဦးသေ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ (ဓါတ်ပုံများအား နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ထိတ်လန့် တက်သူများ မကြည့်ရ) Posted: 20 Jan 2017 06:58 PM PST ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၁၈ရပ်ကွက် မောင်းမကန်လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်းထောင့်ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင်တွင် ၂၁.၁.၁၇ရက်နေ့ ၀၄း၃၅အချိန်ခန့်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆိုင်တွင်နေထိုင်သူ ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ကာ တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ဒဂုံမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီကပြောသည်။ ဆိုင်အတွင်းရှိ ဂတ်စ်အိုးမှ ဂတ်စ်များပန်းထွက်ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူများမှာ ဆို ဂမ်ဘီယာ သမ္မတ အာဏာလွှဲပေးဖို့ သဘောတူ Posted: 20 Jan 2017 06:19 PM PST အက်ဒါမာ ဘားရိုး ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ တုန်း က ဆီနီဂေါ နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဂမ်ဘီယာ သံရုံးမှာ သမ္မတ အဖြစ် ကျမ်း သစ္စာ ကျိန်ဆို ခဲ့ရ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံကို ၂၂ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ် ခဲ့တဲ့ သမ္မတ ယာယာ ဂျမား ဟာ အခု ဆိုရင် အာဏာ လွှဲပြောင်း ပေး ပြီးနောက်မှာ တိုင်းပြည် ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ သဘောတူညီ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အနောက် အာဖရိက နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂီနီ နဲ့ မော်ရီတိန်းနီးယား နိုင်ငံက သမ္မတ တွေဟာ ဂမ်ဘီယာ သမ္မတ You are subscribed to email updates from သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း).To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. Email delivery powered by Google Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ရေသားသူ
Paw Htun Aung
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw) - မျက်နှာသစ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw) - မျက်နှာသစ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ မျက်နှာသစ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ ညီလေး ၁၉ လက်မရှိတဲ့ အမျိုးသားကြီးက ဆရာဝန် ခွဲစိတ်ပေးမယ့်အကြံကို လက်မခံ သန္ဓေအောင်ပြီး ကလေးရရှိစေရန် မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ခင်ဇာခြည်ကျော် ဗေဒင် နဲ့ အကြွေးရလိုမှု ...! (လက်လွန်နေတဲ့ အကြွေးများ ပြန်ရချင်ရင်တော့.....) မိမိ ဘာနက္ခတ်ဆိုတာကို သိချင်ကြသူများအတွက်..လူ၊နတ်၊ဘီလူး သိချင်လား...(စမ်းကြည့်လေ) ...! တစ်ဆင့်ခံအရာဝတ္ကများကြောင့် ဆေးလိပ်ငွေ့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း ..! မှာထားတဲ့အစားအသောက်ကိုစောင့်ရင်း သေနတ်ပစ်ခွင့်ရမယ့် စားသောက်ဆိုင် ...! ချစ်ရည်လူးနိုင်ဖို့အတွက် မိုင်ပေါင်းများစွာ အဖော်ရှာရတတ်တဲ့ငှက် ..! Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ ..! Dislocation of jaw မေးရိုးဆစ်လွဲခြင်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ...! မတ်တတ်ရပ်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်း၏ လက္ခဏာများ ..! တောင်ဒဂုံမြို့ နယ် ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် ငါးဦးသေ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ... (ဓါတ်ပုံများအား နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ထိတ်လန့် တက်သူများ မကြည့်ရ) ..! ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ အမျိုးသမီးများဘဝ ...! ပန်းသေ ပန်းညိုးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း နှင့် ကုသနည်း....! ရာသီဖွားများ၏ အကောင်း အဆိုးများ ..! အပျိုစင်ဘဝကို လေလံတင်ကြသူ_၈ဦးအကြောင်း ..! ဘီလျံနာ မီလျံနာများရဲ့ဇာတာ ..! ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း မင်္ဂလာ ၁၀ ပါး အကြောင်း သိကောင်းစရာ..! ရေသောက်သက့်သည့်အချိန်နှင့် မသောက်သင့်သည့်အချိန် ..! ၀ိတ်အမြန်ကျချင်သူများအတွက်...မနက်စာ ငှက်ပျောသီး ဖြင့် ၀ိတ်ချခြင်း ...! မျက်နှာသစ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ Posted: 21 Jan 2017 01:30 AM PST ညဖက်အိပ်တော့မည်ဆိုပါက တစ်နေ့ကုန်လိမ်းထားသောမျက်နှာ မှ မိတ်ကပ်များကို ဆေးပြီး အိပ် သင့်ပါသည် ။ အချို့က ညဖက်တွင် အိပ်ချင်ဇောဖြင့် မိတ်ကပ်ဖျက်ရန် သွားတိုက်ရန် ပျက်ကွက်တတ်သည်။ မအိပ်မီ မျက်နှာကို ဆေးကြောပြီးမှ အိပ်သည့်အကြောင်းရင်း (၃)ချက် မှာအိပ်နေစဉ် သဘာဝဖြစ်စဉ်အရ ကိုယ်အပူချိန်တက်လာတတ်သဖြင့် ချွေးပေါက်များ ပွင့်လာတတ်သည် ။ ထိုအခါ တစ်နေကုန် လိမ်းထားသော မိတ်ကပ်များက ချွေးပေါက်များထဲ သို့စိမ့်ဝင်ပြီးပိ ညီလေး ၁၉ လက်မရှိတဲ့ အမျိုးသားကြီးက ဆရာဝန် ခွဲစိတ်ပေးမယ့်အကြံကို လက်မခံ Posted: 21 Jan 2017 01:26 AM PST အမျိုးသားတွေအတွက် မိမိရဲ့ ညီလေး(အမျိုးသားအင်္ဂါ) သေးငယ်နေတာဟာ ရှက်ရွံ့စရာ၊ အားငယ်စရာလို့ ထင်တတ်ကြပေမဲ့ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် မက္ကဆီကို နိုင်ငံသားကြီး Roberto Esquivel Cabrera ကျပြန်တော့ ကြီးမားလွန်းအားကြီးနေတဲ့ ညီလေးကြောင့် အခက်တွေ့နေပြီး ချစ်တင်းနှောဖို့လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ Saltillo မြို့သားကြီးရဲ့ ဒူးအထိ တိုက်နေတဲ့ ညီလေးဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက အလေးအပင် ထမ်းခဲ့ရတာကြော သန္ဓေအောင်ပြီး ကလေးရရှိစေရန် Posted: 21 Jan 2017 01:15 AM PST အိမ်ထောင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ သန္ဓေတားနည်းလုံးဝ မသုံးဘဲ ပုံမှန်ဖိုမကိစ္စရှိပေမယ့် တစ်နှစ်ကြာတဲ့ အထိ ကလေးမရရှိတာကို သန္ဓေမအောင်ဘူးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရ အိမ်ထောင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သန္ဓေမအောင်ခြင်းဖြစ်တတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကလေးလိုချင်တဲ့ စုံတွဲတွေအနေနဲ့ သန္ဓေအောင်မြင်ဖို့ရာ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။မမျိုးဥကြွေခြင်းပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်း ၂၈ ရက်တစ်ကြိမ်မှာ ရာသီပေါ်ပါက မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ခင်ဇာခြည်ကျော် Posted: 21 Jan 2017 12:46 AM PST ချစ်သူရှိနေပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော်ကတော့ မကြာခင် ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ ချစ်သူနာမည်ကတော့ တင်ကိုကိုလတ်ကိုသိရပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပြုလုပ်ပြီး အမေရိကားမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးသွားရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကားမှာ တစ်လှည့်စီနေမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်လောက်မှာ လုပ် ဗေဒင် နဲ့ အကြွေးရလိုမှု ...! (လက်လွန်နေတဲ့ အကြွေးများ ပြန်ရချင်ရင်တော့.....) Posted: 21 Jan 2017 12:20 AM PST အကြွေးရဖို့အတွက် ယတြာခြေကြတယ် ။ယတြာခြေ ဓါတ်ရိုက် ရင် ရော တကယ် အကြွေးရပြီလား ဗျာ??..အဲဒီမှာ ၃ ချက်ရှိပါတယ်။၁။ ရှိရက်သားနဲ့ မမေးတဲ့ သူအဲဒီလူကတော့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ရင် ၂ ပတ် အတွင်းလာပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။၂။ ပေးစရာ မရှိ အကြွေးများနေတဲ့ သူအဲဒီလူကို ဓါတ်ရိုက် ရင်တော့ သူရှိလာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ကို အရင်လာပေးပါတယ်။၃။ လုံးဝ အဆင်မပြေ၊ အကြွေးများလို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူ ၊ ရှောင်ပုံးနေတဲ့သူအဲလိုလူမျိုးကတော့ ဆုံး မိမိ ဘာနက္ခတ်ဆိုတာကို သိချင်ကြသူများအတွက်..လူ၊နတ်၊ဘီလူး သိချင်လား...(စမ်းကြည့်လေ) ...! Posted: 21 Jan 2017 12:07 AM PST လူ၊နတ်၊ဘီလူး သိချင်လား...(စမ်းကြည့်လေ)... မိမိရဲ့ မြန်မာမွေးသက္ကရဇ်ကို ၃ နဲ့စား ၁ ကြွင်းရင် နတ်၂ ကြွင်းရင် လူ၃ ကြွင်းရင် ဘီလူးနတ်နဲ့လူက မိတ်ဖက်တယ် နတ်ဇာတာပါတဲ့လူက ဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘီလူးနဲ့လူက လူဇာတာပါတဲ့ သူခံရတက်တယ်..အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဘူးနတ်နဲ့ဘီလူးက ဘီလူးဇာတာပါတဲ့ သူ နှိမ်ခံရတက်တယ်..ကိုယ့်အစွမ်းရှိသမျှ မပြနိုင်ဘူး ခိုင်းသမျှလုပ်နေရတက်တယ်..အိမ်ထောင်ရေးတော့မြဲပါတယ်(သတိ- မိသားစုတစ်ခုမှာ အဖေ တစ်ဆင့်ခံအရာဝတ္ကများကြောင့် ဆေးလိပ်ငွေ့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း ..! Posted: 20 Jan 2017 11:55 PM PST ဆံပင်၊ အရေပြား၊ အ၀တ် အစား၊ နံရံ၊ ကောဇောနှင့် အခြား သောမျက်နှာပြင်များတွင် ဆေးလိပ် မီးငြိမ်းပြီးနောက် တင်ကျန်ရှိနေသော ဆေးလိပ်ငွေ့တွင်ပါဝင်သည့် ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို Thirdhand smoke(THS) တစ်ဆင့်ခံ အရာဝတ္ထုများကြောင့်ဆေးလိပ်ငွေ့နှင့် ထိတွေ့ခြင်း ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည် ။ အမေရိကန်တွင် အသက်သုံးနှစ်နှင့် အထက် အရွယ်ကလေးများ ၈၈ မီလီယံ ခန့်သည် ယင်းတို့၏နေအိမ်တွင်Second- hand smoke (ဆေးလိပ်သောက်သူ မှာထားတဲ့အစားအသောက်ကိုစောင့်ရင်း သေနတ်ပစ်ခွင့်ရမယ့် စားသောက်ဆိုင် ...! Posted: 20 Jan 2017 11:48 PM PST ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အစားအသောက်မှာယူရတာဟာ တစ်ခါတစ်လေကျရင် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စားသုံးမှုများနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်မှာထားတဲ့ အစားအစာကအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ရောက်မလာတာမျိုးတို့ ဖြစ်တတ်တာကြောင့်ပါ။ ဒီလို ဒေါသတွေကို ပေါက်ကွဲနိုင်ဖို့အတွက် Modern Round စားသောက်ဆိုင်က အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အယ်ရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Modern Round စားေ ချစ်ရည်လူးနိုင်ဖို့အတွက် မိုင်ပေါင်းများစွာ အဖော်ရှာရတတ်တဲ့ငှက် ..! Posted: 20 Jan 2017 11:41 PM PST အလက်စကာမှာရှိတဲ့ ရေညှောင့်ကောင်ငှက်အထီးလေးတွေဟာ သက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာ အချစ်နဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် အားကျိုးမာန်တတ် အကြိုးစားဆုံးသတ္တဝါတွေလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ အဖော်ကိုမတွေ့မချင်း ပျံသန်းရင်း လိုက်လံရှာဖွေသလို ရှာတွေ့လို့ လက်မခံဘူးဆိုရင်လည်း နောက်ငှက်အမတစ်ကောင်ကို လိုက်လံရှာဖွေတတ်သူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ လေ့လာချက်အသစ်တွေအရ ရေညှောင့်ကောင်ငှက်အထီးလေးတွေဟာ မိုင်တစ်ရာလောက် ပျံသ Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ ..! Posted: 20 Jan 2017 11:23 PM PST တရားသူကြီးချုပ် ရောဘတ်စ်၊ သမ္မတ ကာတာ၊ သမ္မတ ကလင်တန်၊ သမ္မတ ဘုရှ်၊ သမ္မတ အိုဘားမား၊ ရောင်းရင်း အမေရိကန်များနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများခင်ဗျား။....။အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာ တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး နဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူအားလုံးကို ပေးထားတဲ့ကတိ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် အားထုတ်မှုတရပ်ကို ပူးပေါင်း ပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် လာမ Dislocation of jaw မေးရိုးဆစ်လွဲခြင်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ...! Posted: 20 Jan 2017 11:15 PM PST မင်္ဂလာပါဆရာ ။ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ (အမျိုးသမီး) လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက အစားစားနေရင်း အံတင်သွားပါတယ် ။ Voltex Spray ဖြန်းပြီး နှိပ်လိုက်တာ ပျောက်သွားပါတယ် ။ အခု နှစ်ရက်ဆက်တိုက် တပုံစံတည်း ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အရိုးအကြောဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုပါသလားရှင့် ။မေးရိုးအဆစ်လွဲတာကို ပြင်တတ်ပါသလား ။ ပြင်ပေးမယ့်သူက ဖြစ်တဲ့သူရဲ့နောက်ကနေရမယ် ။ ဖြစ်တဲ့သူကို ပါးစပ် ဟထားခိုင်းပါ ။ ပြုပြင်ပေးသူက လက်မနှစ်ချောင်း ထောင်ပြီး လက် မတ်တတ်ရပ်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်း၏ လက္ခဏာများ ..! Posted: 20 Jan 2017 11:09 PM PST မတ်တတ်ရပ်စဉ်မှာ သွေးပေါင်ကျခြင်း (Orthostatic Hypotension) ဟာ အဖြစ်များပါတယ် ။ လက္ခဏာတွေကတော့ အချိန်ကြာကြာထိုင်ပြီး ဒါမှမဟုတ် လဲလျောင်းနေပြီးနောက် မတ်တတ်ရပ် လိုက်တဲ့ အခါ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း မတ်တတ်မရပ်နိုင်တော့ဘဲ မူးမေ့မလို ဖြစ်သွားတတ်တာပါ ။Orthostatic Hypotension ရဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ မူးဝေတာ ဒါမှမဟုတ် ရီတီတီဖြစ်တာပါ။ စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ခေါင်းကလည်နေသလို ခံစားရပြီး မူးနောက်နောက်နဲ့ မကြည်မလင် ခံ တောင်ဒဂုံမြို့ နယ် ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် ငါးဦးသေ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ... (ဓါတ်ပုံများအား နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ထိတ်လန့် တက်သူများ မကြည့်ရ) ..! Posted: 20 Jan 2017 11:01 PM PST ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၁၈ရပ်ကွက် မောင်းမကန်လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်းထောင့်ရှိ အကွီစားသောက်ဆိုင်တွင် ၂၁.၁.၁၇ရက်နေ့ ၀၄း၃၅အချိန်ခန့်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆိုင်တွင်နေထိုင်သူ ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ကာ တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ဒဂုံမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီကပြောသည်။ ဆိုင်အတွင်းရှိ ဂတ်စ်အိုးမှ ဂတ်စ်များပန်းထွက်ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူများမှာ ဆို ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ အမျိုးသမီးများဘဝ ...! Posted: 20 Jan 2017 10:54 PM PST စိတ်က မိဘအတွက်...ကိုယ်ခန္ဓာက လင်ယောကျာ်းအတွက်...အချိန်တွေက သားသမီးအတွက်... ကိုယ့်အတွက် မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေရယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေပဲ ကျန်ခဲ့တယ်...-လှပလွန်းရင် အန္တရာယ်များတယ်...ရုပ်ဆိုးပြန်တော့လည်း ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ချင်... ပွင့်လင်းလွန်းတော့ အပေါစားထင်မယ်...စကားနည်းတော့ ပေါင်းသင်းရခက်တယ်... တကိုယ်တည်းနေမယ်ဆိုတော့ လိုချင်တဲ့သူမရှိလို့တဲ့...အိမ်ထောင်ပြုတော့လည်း လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးပြန်ကော...လ ပန်းသေ ပန်းညိုးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း နှင့် ကုသနည်း....! Posted: 20 Jan 2017 10:07 PM PST ပန်းသေ|ပန်းညိုးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ.. ဆေးလိပ်|အရက်အလွန့် အကျွံ့ သောက်သုံးခြင်း |ဟော်မုန်းပါသော ဆေးများစွဲသောက်ခြင်း|အသည်းခြောက် ခြင်း|အရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ| သုတ်ခမ်းခြင်း|အစရှိသော ရောဂါလက္ခာဏများ ~~~~~~~~~~~~ အစားကောင်းစွာမစားနိုင်ခြင်း|အိပ်၍မပျော်ခြင်း|ခြေဖျားအေးခြင်း|ရေသောက်၍ မဝခြင်း ဆီးခဏခဏသွားခြင်း|ဆီးသွားလျှင်ကျင်းချောင်းပူခြင်း|ရံဖန်ရံခါနပ်ပြစ်ကဲသို့ ထွက်ခြင်း[ ကျင်းချောင်းမှ] ရာသီဖွားများ၏ အကောင်း အဆိုးများ ..! Posted: 20 Jan 2017 09:58 PM PST * Aries (မိဿ ရာသီဖွား) မတ် ၂၁ ရက် မှ ဧပြီ ၂၀ * အကောင်း- တက်တက်ကြွကြွ ရှိတယ်။ ကြင်နာ တတ်တယ်။ သတ္တိရှိတယ်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းပြီး အနုပညာ ပါရမီပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ဓာတ် ၇ှိ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ အဆိုး- စိတ်တော့ သိပ်မရှည်ချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကို လာထိရင် မဟုတ် မခံပြန်ပြောချင်စိတ်ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စကား ကို မပွင့် မလင်းပြောတတ်တယ်။ မစဉ်းစားဘဲ တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်တယ်။ အကြံပြုချက်- ကိုယ့်ကိုယ် ကို ယုံကြ အပျိုစင်ဘဝကို လေလံတင်ကြသူ_၈ဦးအကြောင်း ..! Posted: 20 Jan 2017 09:44 PM PST အမျိုးသမီး တစ်ဦး အတွက် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ဟာ ဘာနဲ့မှ လဲလှယ် လို့ မရတဲ့ တန်ဖိုးကြီး ရတနာ အဖြစ် တင်စားလေ့ ရှိ ကြပါတယ်။ ငွေကြေးကြောင့် အပျိုစင် ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ရ သူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ အမျိုးသမီး တွေဟာ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ ငွေကြေးနဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ကို မလဲနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုတာ မျိုးလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပျိုစင် ဘ၀ကို ရောင်းချ မှုတွေ ဟာ မကြာခဏ ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြ ဘီလျံနာ မီလျံနာများရဲ့ဇာတာ ..! Posted: 20 Jan 2017 09:31 PM PST ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးတွေဟာ ဘယ်လိုဇာတာရှင်တွေလဲ။ သူတို့ ဇာတာမှာ ဘယ်ဂြိုဟ်၊ နက္ခတ်တွေက ဘယ်လို ရပ်တည်နေသလဲ။ သူတို့ ဇာတာလို အနေအထားတွေက ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရော ပါနေမလား။ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားပါနဲ့။ ခက်ခက်ခဲခဲ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားဟာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၂၂ ကြားမှာ မွေးတဲ့ ကန်ရာသီဖွားသာ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားမှာ ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး ဖြစ်ဖို့ Chance ပိုများပြီလို့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း မင်္ဂလာ ၁၀ ပါး အကြောင်း သိကောင်းစရာ..! Posted: 20 Jan 2017 09:11 PM PST ၁။ ဦးထိပ်၌ ရေစင်သွန်းလောင်းပြီး ထိမ်းမြားခြင်း ဘိသိက်ဆရာနေဖြင့် လက်ယာရစ် ခရုသင်းထဲကိုဖြစ်စေ၊ ဖလားတစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေ န၀ရတ် ၉ ပါး၊ နံ့သာ ၅ မျိုးတို့၏ အရည်ကိုထည့်ပြီး သပြေညွန့်ထိုးကာ သတို့သား၊ သတုိ့သမီးတို့၏ ဦးခေါင်းထိပ်သို့ ရေစင်သွန်းလောင်းပြီး လက်ထပ်ပေးပါက ထိမ်းမြားခြင်း အင်္ဂါရပ်နှင့် ပြည့်စုံပါသည်။ ၂။ ရေဖလား၌ လက်ချထားပြီး ထိမ်မြားခြင်း ရေဖလားတစ်ခုခုအတွင်း သတို့သား ရေသောက်သက့်သည့်အချိန်နှင့် မသောက်သင့်သည့်အချိန် ..! Posted: 20 Jan 2017 09:00 PM PST ရေကို ဘယ်အချိန်သောက်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ ? ၁။ အစာမစားခင် နာရီဝက်ခန့် ရေတစ်ခွက် ကြိုသောက်ထားလျှင် အစာကြေညက်မည်။၂။ ရေမချိုးခင် ရေတစ်ခွက် အရင်သောက်ပေးလျှင် သွေးခုန်နှုန်းမှန်စေမည်။၃။ ညဖက် တစ်ရေးနိုးလာသည့်အခါ ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးလျှင် ခြေသလုံး ကြွက်သားများ ကြွက်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးစေမည်။၄။ ညမအိပ်ခင် ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးလျှင် နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးမည်။၅။ မနက်အိပ်ယာထချိန် ရေတစ်ခွ ၀ိတ်အမြန်ကျချင်သူများအတွက်...မနက်စာ ငှက်ပျောသီး ဖြင့် ၀ိတ်ချခြင်း ...! Posted: 20 Jan 2017 08:37 PM PST ဒီ plan ဟာ ၀ိတ်ကျတာ မြန်ပေမယ့် (၁) ပတ် (၂) ပတ် ထက်ပိုပြီး စားနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အမြဲအလွန်အကျွံလုပ်ရင်လည်း ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပုံမှန်လေးလည်း စားချင်တာစားမယ်။ ပုံမှန်လေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကျမယ့် plan မျိုးကို တောင့်တ ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနစ်က စပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ The Morning Banana Diet plan ဟာ စိတ်ဝင်စားလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ လိုက်လုပ်ကြည့်တာမှာ လွယ်လည်းလွ You are subscribed to email updates from Pho Thu Taw | PhoThuTaw.com | ဖိုးသူတော်.To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. Email delivery powered by Google Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ရေသားသူ
ဒေါင်းမာန်ဟုန် အမေရိကန်ရဲ့ ၄၅ဦးမြောက် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဖြစ်လာ ကန်သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမြင်ကွင်း Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဆုံ Donald Trump မိန့်ခွန်း ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဖေါ်ဆောင်နိုင်မလား မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုမရှိလို့ ယန်ဟီးလီပြော ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာခရီးစဉ်စတင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့ကိုပါဖို့ ကာချုပ်သဘောတူ YBSစနစ်အတွက် ကားအစီးရေ ၁၀၀၀နီးပါး ထပ်မံ ၀ယ်ယူရန်ရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဆို မြန်မာနိုင်ငံသား ငါးဦးကို သတ်ဖြတ်၍ မီးရှို့ခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားကို မော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ နှစ်ဦး အကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန် YBS လိုင်း တိုင်ကြားစာ ၁ဝဝဝ ရှိနေ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် YBS တံဆိပ်ကပ် အခမဲ့ဆိုပြီး ပြေးဆွဲတဲ့ Dyna ယာဉ် အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက် မက္ကဆီကို မူးယစ် ရာဇာ အယ်လ် ချာပို ဂတ်ဇ်မန်းကို အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ ရပ်စောက်မှာရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီလိုနေ မန္တလေးမြို့ တွင် အမျိူးသမီးတစ်ဦးကို ဓါးဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်ပြီး၊ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မီးရှို့သတ်မှု ဖြစ်ပွား အမေရိကန်ရဲ့ ၄၅ဦးမြောက် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဖြစ်လာ Posted: 20 Jan 2017 08:15 PM PST အမေရိကန်သမ္မတသစ်ရာထူးအတွက် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ မနေ့က ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရာမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာတော့ ဒါဟာ အစိုးရတရပ်ကနေ နောက်အစိုးရ ဆီကို အာဏာလွှဲပြောင်းတာမဟုတ်သလို၊ ပါတီတခုကနေ နောက်တခုကို လွှဲပြောင်းပေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က အာဏာကို အမေရိကန်လူထုဆီကို ပြန်လည်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် ဝါရှင်တန်က လူနည်းစုဟာ အစိုးရရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ရယူနေပြီး၊ ပြည်သူတွေကတော့ ပေးဆပ်နေရကာ၊ ဝါရှင်တန်သာ ကြီးပွားလာတယ်၊ ပြည်သူတွေကတော့ ချမ်းသာမှုကို မခံစားရဘူးလို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကြီးပွားသွားပေမယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေမှာတော့ စက်ရုံတေ အလုပ်ရုံတွေ ပိတ်ထားရသလို အလုပ်အကိုင်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ အာဏာရှိတဲ့ အသိုင်းအဝန်းကတော့ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင် ပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ အကာအကွယ်မဲ့နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မဟုတ်သလို ဝါရှင်တန်မှာ သူတို့အောင်ပွဲခံနေချိန်မှာ နိုင်ငံဝတဝှမ်းက ခက်ခဲစွာ ရပ်တည်နေရတဲ့ မိသားစုတွေဟာ အောင်ပွဲမခံနိုင်ဘူး၊ အခု အဲဒီအပြောင်း အလဲတွေကို စတင်နေပြီ၊ အမေရိကန်ဟာ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်၊ အစိုးရကို ဘယ်ပါတီက ထိန်းချုပ်ထားသလဲဆိုတာထက် အစိုးရပြည်သူက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လားဆိုတာကသာ အဓိကကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသံကို အခုချိန်မှာ လူတိုင်းက နားထောင်နေပြီလို့လည်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေကို စတေးကာ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ချမ်းသာစေခဲ့သလို၊ စစ်တပ်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်ကို မကာကွယ်ပဲ၊ သူများနယ်နိမိတ်တွေကို ကာကွယ်ခဲ့ရတယ်၊ သူများစစ်တပ်ကို အထောက်အပံပေးနေရတယ်၊ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ အကုန်အကျ ခံနေရတယ်၊ ကျနော်တို့ ချမ်းသာမှုကို မှေးမှိန်စေပြီး သူများချမ်းသာအောင်လုပ်နေရတယ်၊ နိုင်ငံထဲကနေ စက်ရုံတွေ တခုပြီးတခု ထွက်ခဲ့ကာ ပြည်တွင်းက အမေရိကန်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို မစဉ်းကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီအတွက် အားလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်လည်ခွန်အားကြီးလာအောင် လုပ်ကြစို့၊အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်လည် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင် လုပ်ကြစို့၊ လုံခြံအောင်လုပ်ကြစို့၊ အားလုံးစုပေါင်းပြီး ကြီးမြတ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြစို့၊ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါ စေလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအပြီးမှာ သမ္မတဟောင်း အိုဘားမားကလည်း ကောင်းချီးပေး ခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကတော့ ဆင်းရဲသားတွေကို သနားညှာတာဖို့နဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ အညီ လျှော်ညီစွာ ပြုမူဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။သူ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေစဉ်မှာပဲ သူ့ကို မနှစ်သက်တဲ့သူတွေကလည်း ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်နေရာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး လူ ၉၀ကျော် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒူးမားလို့ခေါ်တဲ့ ရုရှား လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အလက်ဇီ ပွတ်ရ်ှကော့ဗ်ကတော့ ထရမ် သမ္မတဖြစ်လာတာဟာ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို၊ အုပ်ချုပ်သူတွေအကြား စိတ်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမှုကို မြင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချပါတယ်။By ဧရာဝတီ ကန်သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမြင်ကွင်း Posted: 20 Jan 2017 07:34 PM PST ကန်သမ္မတသစ် Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုစဉ်။ (ဇန်နဝါရီ ၂၀-၂၀၁၇)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သမ္မတသစ်အဖြစ် Donald Trump တက်လာခဲ့ပါပြီ။ သမ္မတဟောင်း Barack Obama လက်နေ သမ္မတသစ် Daonld Trump က ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနဲ့ အာဏာကို ညင်ညင်သာသာပဲ လွှဲပြောင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် သောကြာနေ့ မနက်ပိုင်းကစလို့ သမ္မတသစ်ပွဲ အခမ်းအနားတွေကို အခုအချိန်ထိလည်း ဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ သမ္မတသစ်အပေါ် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတချို့က အကြမ်းဖက်အသွင်ဆောင်တဲ့အတွက် ၉၀ ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ သမိုင်းဝင်နေ့ အခမ်းအနားတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်း အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၅ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် Donland John Trump က အခုလိုကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး သမ္မတအာဏာကို ညင်ညင်သာသာပဲ လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။ တင်းကြပ်တဲ့ လုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေကြားမှာပဲ ဝါရှင်တန်မြို့တော် Capitol Hill လွှတ်တော် အဆောက်အဦးမှာ ကျမ်းကျိန်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို သမ္မတဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Barack Obama၊ George W. Bush၊ Bill Clinton နဲ့ Jimmy Carter တို့လည်းတက်ရောက်ပါတယ်။ Trump ရဲ့သမ္မတလောင်းပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်းကတော် Hillary Clinton လည်းသူ့ခင်ပွန်း Bill Clinton နဲ့အတူ ကျမ်းကျိန်ပွဲကို တက်ရောက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့သမ္မတသစ်ကို လက်ရှိသမ္မတက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတခုကတော့ Barack Obama နဲ့ Donald Trump တို့ဟာ အိမ်ဖြူတော်ကနေ Capitol Hill လွှတ်တော်အဆောက်အဦးဆီကို အခမ်းအနား မကျင်းပခင်မှာ ကားတစီးထဲနဲ့ အတူတူလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Donland Trump နဲ့ဇနီး Melania Trump တို့က သောကြာနေ့မနက်အစောပိုင်းက အိမ်ဖြူတော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ သမ္မတကတော် Michelle Obama တို့နဲ့အတူ လဘက်ရည် အတူသောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။သမ္မတသစ် Donald Trump ရဲ့ကျမ်းကျိန်ပွဲကို ရပ်ဝေး၊ ရပ်နီးက သူ့အပေါ်ထောက်ခံသူအများအပြားလည်း လာရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးဖိတ်ကြားခံရလို့ တက်ရောက်ကြသူတွေထဲမှာတော့ အမေရိကန် အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီက ကိုလှဘုန်းမြင့်ပါဝင်ပါတယ်။လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ တက်ရောက်တဲ့ ကိုလှဘုန်းမြင့်က သမ္မတကျမ်းကျိန်ပွဲမှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြား သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကို ခုလိုပြောပြပါတယ်။" Illinois ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် Peter Roskam ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ ကျနော် သွားရောက်ပြီး တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ရတာကတော့ ဒီအခုသမ္မတဖြစ်တဲ့ ထရမ့်ကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခါစ အချိန်မှာ ထောက်ခံခဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် မထောက်ခံခဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် အခုသူ သမ္မတဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။ သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုက နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုပဲ ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကို နှလုံးသွင်းပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော် အားပေးထောက်ပံ့ သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါတယ်။ အကုန်လုံးက တ နိုင်ငံ၊ တလူမျိုး တိုးတက်မှုကိုပဲ ရှေးရှုကြည့်ပြီးတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်စွဲ သဘောမတူညီမှုတွေကို ခဝါချပြီးတော့ နိုင်ငံကောင်းကျိုးပေါ့နော် အတူလက်တွဲပြီးတော့ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိသိသာသာ ထင်ရှားပါတယ်။"သမ္မတသစ် Trump ကျမ်းကျိန်ပွဲကို သွားခဲ့တဲ့ M တူးအောင်ကလည်း သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ခုလိုပြောပြပါတယ်။" လူကတော့ တော်တော်များတာကို တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ ကျနော် အသွားလမ်းမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးသလို အပြန်လမ်းမှာလည်း ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လာတဲ့သူတွေ တွေ့တဲ့သူ တော်တော်များများကတော့ ထရမ့်ကို အားပေးတဲ့သူတွေချည်းပဲလို့သိရတယ်။ အားလုံးက ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ပဲ ထရမ့်မိန့်ခွန်း ပြောပြီးသွားတဲ့အထိ အားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လုံခြုံရေးတွေက တော်တော်လေး တင်းကျပ်ထားတာကို တွေ့တယ်။သမ္မတသစ်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးရှေ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတလျှောက် ကျမ်းကျိန်ပွဲဆီ သွားရတဲ့ ဝင်ပေါက်တချို့မှာတော့ ပွဲလာသူတွေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတချို့က ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြတာတွေ ရှိခဲ့သလို၊ ကျမ်းကျိန်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာနဲ့သိပ်မဝေးလှတဲ့ ဝါရှင်တန်မြို့ထဲက နေရာတော်တော် များများမှာလည်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့ထဲတနေရာမှာဆိုရင် Trump သမ္မတဖြစ်လာတာကို ကန့်ကွက်ချီတက် လာကြတဲ့တဲ့ လူ ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲက တချို့က တချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဆောက်အဦးတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးကြတဲ့ အတွက် ရဲတွေက မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေသုံးလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဆန္ဒပြကြတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ရဲတွေက ဆန္ဒပြသူတွေကို Pepper Spray ငရုတ်ရည်တွေနဲ့ ပက်ဖြန်းခဲ့ပါတယ်။ တခါ သမ္မတသစ် ကျမ်းကျိန်တဲ့နေရာကနေ အိမ်ဖြူတော်ဆီသွားမယ့် Pennsylvania Avenue လမ်းမကြီးနားမှာလည်း စီတန်းချီတက်ပွဲကိုနှောင့်ယှက်ဖို့ကြိုးစားသူ ဆန္ဒပြသူတချို့နဲ့ ရဲတွေ အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ရဲဝန်ထမ်း ၂ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သလို ဆန္ဒပြသူ ၉၅ ယောက်အနည်းဆုံး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေကြားမှာပဲ သမ္မတသစ် Donald Trump က လွှတ်တော်အဆောက်အဦးကနေ စီတန်းချီတက်ပွဲလုပ်ရာလမ်းတလျှောက်ကို ဦးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ လမ်းခရီးမှာ သမ္မတ Trump ကစတိလောက် ကားပေါ်ကဆင်း လမ်းလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ခရီးကိုတော့ ကားပေါ်ကနေပဲ လမ်းဘေး တဖက်တချက် မှာ စောင့်နေကြသူတွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမ်းတလျှောက်မှာလည်း သမ္မတသစ်ကို ထောက်ခံသူတွေ ရှိသလို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း သူတိုရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေကို ကိုင်ဆောင် အော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ လူအရေအတွက် အားဖြင့်တော့ အရင်သမ္မတအိုဘာမားကျမ်းကျိန်ပွဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုနည်းပါတယ်။ ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ လုံခြုံရေးအထူး တင်းကြပ်ထားတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်း Barack Obama နဲ့သမ္မတကတော်ဟောင်း Michelle Obama တို့ကတော့ Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးတဲ့နောက် လွှတ်တော် အဆောက်အဦးကနေပဲ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာသွားတာကို သမ္မတသစ် Donald Trump နဲ့ သမ္မတကတော် Melania Trump တို့က နှုတ်ဆက်ပို့ဆောင်ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးလောကကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ Mr. Obama နဲ့ဇနီးတို့ဟာ Maryland ပြည်နယ်က Andrews လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကတဆင့် California ပြည်နယ် Palm Springs ဆီကိုအပန်းဖြေခရီး ထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စုမြတ်မွန် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)http://burmese.voanews.com Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ Posted: 20 Jan 2017 07:32 PM PST တရားသူကြီးချုပ် ရောဘတ်စ်၊ သမ္မတ ကာတာ၊ သမ္မတ ကလင်တန်၊ သမ္မတ ဘုရှ်၊ သမ္မတ အိုဘားမား၊ ရောင်းရင်း အမေရိကန်များနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများခင်ဗျား။အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာ တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး နဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူအားလုံးကို ပေးထားတဲ့ကတိ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် အားထုတ်မှုတရပ်ကို ပူးပေါင်း ပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ဘယ်လို ရှေ့ကို ချီတက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကျနော်တို့ အတူတကွ ချမှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့အလုပ်ကို ပြီးအောင် ဆောင်ရွက် သွားကြမှာ ဖြစ်ပါမယ်။လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျနော်တို့ဟာ ဒီလှေကားထစ်တွေပေါ်မှာ စုရုံးကြပြီးတော့ စည်းကမ်း သေ၀ပ်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အာဏာလွှဲပြောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ သမ္မတ ကတော် မီရှဲ အိုဘားမားတို့ကို ဒီအာဏာလွှဲပြောင်းရေးအတွက် တောက်လျှောက် စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ကူညီခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ အခမ်းအနားဟာ အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ အစိုးရတရပ်ဆီက အာဏာကို နောက်အစိုးရတရပ်ဆီ လွှဲပြောင်းတာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ နိုင်ငံရေး ပါတီတခုဆီက နောက်ပါတီတခုဆီကို လွှဲပြောင်းပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က အာဏာကို ခင်ဗျားတို့ဆီ၊ အမေရိကန်လူထုဆီ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကာလအတန်ကြာသည်အထိ ၀ါရှင်တန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ လူနည်းစု တစုက အစိုးရရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို သိမ်းဆည်းရယူနေခဲ့ကြပြီး ကျန် ပြည်သူတရပ်လုံး ကတော့ ဒီအတွက် ပေးဆပ်နေခဲ့ရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။၀ါရှင်တန်မြို့တော်ဟာ ဖွံ့ဖြိုး ကြီးပွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ပြည်သူလူထု မခံစားခဲ့ရပါဘူး။နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကြီးပွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ စက်ရုံတွေ ပိတ်ထားခဲ့ရတယ်။အာဏာရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကတော့ အကာအကွယ် မရခဲ့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အောင်ပွဲများဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အောင်ပွဲများ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီမြို့တော်မှာ သူတို့ အောင်ပွဲခံနေ ချိန်မှာ နိုင်ငံအ၀ှမ်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရပ်တည်နေရတဲ့ မိသားစုတွေမှာ အောင်ပွဲခံစရာ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီအတွက် အပြောင်းအလဲတွေ အားလုံးဟာ ဒီနေရာမှာ အခုအချိန် စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီအခါသမယဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခါသမယ၊ ခင်ဗျားတို့ပဲ ပိုင်ဆိုင်ပါ တယ်။ ဒီကနေ့ ဒီနေရာမှာ စုရုံးလာတဲ့လူတွေအားလုံး အမေရိကန်နိုင်ငံတ၀ှမ်းကနေ ကြည့်ရှု နေကြတဲ့ လူတွေအားလုံး ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့နေ့၊ ဒီအခမ်းအနားဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခမ်းအနားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အစိုးရကို ဘယ်ပါတီက ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာ တကယ့် ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရကို ပြည်သူတွေက ထိန်းချုပ်နိုင်သလား ဆိုတာကသာ လျှင် တကယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့ကို ပြည်သူတွေဟာ ဒီတိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် အုပ်ချုပ်သူ တွေ ဖြစ်လာတဲ့နေ့အဖြစ် တွင်ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မေ့ဖျောက်ထားခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ နောင်ကို ပစ်ပယ်ခံရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသံကို လူတိုင်းက အခုအချိန်မှာ နားထောင်နေကြပါပြီ။သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်ကြီးတခုမှာ သန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ပါဝင်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကို ကမ္ဘာကြီးက အရင်တခါမှ မတွေ့မမြင်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တရပ် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတခုဟာ သူ့နိုင်ငံသားတွေကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့သားသမီးတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာ တော်ဖြောင့်မှန်ကန်တဲ့ လူထုရဲ့ တရားမျှတပြီး ရသင့်ရထိုက်တဲ့ တောင်းဆို မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ အများစုအတွက် လက်တွေ့မှာ လုံးဝ ခြားနားနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ မြို့ပြတွေအတွင်း မိခင်တွေ၊ ကလေးတွေဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါး မှု ရစ်ပတ်ခြင်း ခံနေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတလွှားမှာ သံချေးတက်နေတဲ့ စက်ရုံတွေဟာ သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူတွေလို ပြန့်ကျဲနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ဟာ ငွေကြေးတွေ ဒလဟောသုံးပေမဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ အသိပညာ ကင်းမဲ့နေပါတယ်။ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ပြစ်မှုဂိုဏ်းတွေ၊ မူးယစ်ဆေးတွေဟာ အသက်ပေါင်းများစွာကို လုယူသွားခဲ့ပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်တွေ့ အကောင်အထည် မဖော်လိုက်ရတဲ့ အလားအလာကောင်းတွေကိုလည်း လုယက်ယူငင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမေရိကန်ရဲ့ လူမှုဒုက္ခ တွေဟာ ဒီနေရာမှာ ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ရပ်တန့်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ တနိုင်ငံတည်းသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ နာကျင်မှုတွေဟာ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ နာကျင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာလည်းပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုပဲ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဟာ တခုတည်းသော အသည်းနှလုံး၊ တခုတည်းသော နေအိမ်၊ တခုတည်းသော အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို အတူတကွ ဝေမျှ နေထိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျနော်ခံယူတဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံသားအားလုံးကို သစ္စာခံမယ့် ကျိန်ဆိုမှု ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့ဟာ အမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေကို စတေးပြီး၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ချမ်းသာကြွယ်ဝစေခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်တပ်ကို စိတ်ညစ်စရာကောင်းအောင် ဆုတ်ယုတ်စေပြီး၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်က စစ်တပ်တွေကို အထောက်အပံ့ ပေးနေခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နမိတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ငြင်းဆန်ပြီး၊ သူများနိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်နမိတ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးတွေ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းစေပြီးတော့ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ဒေါ်လာ သန်း သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ခွန်အား၊ ယုံကြည်မှုတွေကို မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်စေပြီး၊ သူများနိုင်ငံကို ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ စက်ရုံတွေ တခုပြီးတခု ကျနော်တို့နိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ အမေရိကန်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးသွားရတာကိုတော့ လုံးဝ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေဟာ အိမ်ယာတွေ စွန့်လွှတ်ရ တယ်။ ကျန်တဲ့ ကမ္ဘာတလွှားကို သွားပြီးတော့ ဖြန့်ဖြူးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ အတိတ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ အခုအခါ ကျနော်တို့ဟာ ရှေ့ကိုပဲ မျှော်ကြည့် နေပါပြီ။ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့တွေ ဒီမှာ စုရုံးပြီး၊ မြို့တိုင်း၊ နိုင်ငံခြားမြို့တော်တွေ တိုင်း၊ အာဏာရှိ အဖွဲ့စည်းတိုင်း ကြားသိစေဖို့အတွက် ကြေညာချက်တရပ်ကို ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီးတော့ ကျနော်တို့မြေကို အတွေးအမြင်သစ်က အုပ်ချုပ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ "အမေရိကန်သည် ပထမ" ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကုန်သွယ်မှု၊ အကောက်ခွန်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ အမေရိကန် အလုပ်သမားတွေ၊ အမေရိကန် မိသားစုတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခြားနိုင်ငံတွေက အမေရိကန်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ကုမ္ပဏီ အကျိုးစီးပွားတွေကို ခိုးယူပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကိုပါ ဖျက်ဆီးနေတာတွေကို တားဆီးဖို့အတွက် အမေရိကန်ရဲ့ နယ်စပ်တွေအားလုံးကို ကာကွယ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာမှုနဲ့ နိုင်ငံ့ခွန်အားကို တိုးတက်လာစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ကျနော့်အသက်နဲ့အမျှ ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်ပျက်မသွားစေရပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်ပြီး အောင်မြင်လာတော့မှာပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မတူတဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုးနဲ့ အောင်မြင်လာမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ ပြန်ရ ရစေမယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နယ်စပ်တွေကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရစေမယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေကို ပြန်ရ ရစေမယ်။ အိမ်မက်တွေအားလုံးလည်း ပြန်အကောင်အထည်ဖော်လာရပါစေလိမ့်မယ်။လမ်းသစ်တွေဖောက်မယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေ၊ တံတားတွေ၊ လေဆိပ်တွေ၊ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ၊ ရထားလမ်းတွေ ကိုလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ အင်မတန် အံ့မခန်းစရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတ၀န်း နေရာအနှံ့ တည်ဆောက်သွားပါမယ်။လူမှုအထောက်အပံ့တွေအပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ ပြန်လည်ရရှိစေရမယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီး ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာ အမေရိကန်လက် အမေရိကန် လုပ်အားတွေနဲ့ပဲဖြစ်စေရမယ်။ဒီအတွက် အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ပဲရှိတယ် - အမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပါ။ အမေရိကန် လုပ်အားတွေကိုပဲ သုံးပါ။ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့လည်း ကျနော်တို့ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ မိတ်ဖက်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးနားလည်ကြရမှာက နိုင်ငံတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားကိုယ်ပထမ ဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျနော်တို့ရဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းဖို့မရှိပေမယ့် လူတိုင်းအားကျတဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချယ်မှုန်းပြသသွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်ဟောင်းတွေနဲ့ ချစ်ကြည်မှု ပိုမိုတိုးပွားအောင် လုပ်ပြီး တချိန်တည်းမှာ မဟာမိတ်အသစ်တွေလည်း ရှာသွားမယ်။ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို စည်းရုံးလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်ဝါဒကို ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကနေ လုံးဝ ပပျောက်သွားတဲ့အထိ ကျနော်တို့ တိုက်ဖျက်သွားပါမယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးရဲ့ အဓိက အခြေခံ အုတ်မြစ်ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအပေါ် လုံးဝ သစ္စာစောင့်သိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့အပေါ် ဒီလိုသစ္စာစောင့်သိမှုနဲ့အတူ တဦးအပေါ်တဦး သစ္စာစောင့်သိမှုတွေလည်း ပြန်လည် တွန်းကားလာပါလိမ့်မယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကို ရင်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ပြီးဆိုရင် တခြားသံသပွားစရာ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်သာယာ ကောင်းမွန် လိုက်ပါသလဲလို့ သမ္မာကျမ်းစာ မှာလည်း ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲရှိတာတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော သဘောမတူတာတွေကို ရိုးရိုးသားသား အခြေအတင်ဆွေးနွေးပြီး သွေးစည်းညီညွှတ်မှုတွေ တည်ဆောက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန် (နိုင်ငံသား) တွေ ညီညွှတ်ပြီဆိုရင် အမေရိကန် (ပြည်ထောင်စုကြီး) ကို ဘယ်လိုမှ တားဆီးလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာမှကြောက်မနေကြပါနဲ့။ ကျနော်တို့အတွက် အကာအကွယ်တွေရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း အကာအကွယ်တွေ ရှိနေမှာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေက ကျနော်တို့ကို ကာကွယ်ပေးနေသလို ဒီထက် ပိုအရေးကြီးတာက ဘုရားသခင်ကလည်း အကာအကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အကြီးမားဆုံးနဲ့ ဒီထက်ကြီးမားဆုံးတွေကိုပဲ တွေးဆ ရည်မှန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသရွှေ့ ရှင်သန်နေမှာပဲဆိုတာ အမေရိကားမှာ အားလုံးနားလည်ထားကြပါတယ်။ အပြောပဲရှိပြီး လက်တွေ့အလုပ်မပြနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလူတွေဟာ တချိန်လုံး ငြီးတွားအကြောင်းပြနေကြသူတွေသာဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်း ဘာမှ အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။အနှစ်မပါတဲ့ စကားတွေအတွက် အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်တွေ့လုပ်ရမယ့် အချိန်ရောက်လာပါပြီး။ဒါတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တခြားသူတွေရဲ့ အပြောကို မခံပါနဲ့။ အမေရိကန်တွေရဲ့ ရင်ထဲ အသည်းထဲက ခွန်အားသတ္တိနဲ့ ရင်ဆိုင်နို်င်မှုတွေကို ဘယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကမှ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှ မရှုံးပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ပြန်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်လာမှာပါ။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ရာစုနှစ်အသစ်တခုထဲကို ချည်းနှင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး အာကာသရဲ့ လျှို့ဝှက်မှုတွေကို ဖွေရှာစူးစမ်းဖို့၊ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရောဂါ ဘယ ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ ကင်းရှင်းသွားစေဖို့၊ စွမ်းအင် စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ ခေတ်မှီ နည်းပညာရပ်တွေကို လုံလုံလောက်လောက် ထိန်းသိမ်း သုံးစွဲသွားနိုင်ဖို့ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာအသစ်တရပ်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ၀ိညာဉ်တွေထဲထိုးဝင်လာပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မြှင့်တင် နိုင်မှာဖြစ်သလို ရှိခဲ့တဲ့ ကွဲလွှဲမှု ဒဏ်ရာတွေကိုလည်း ကုစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီးတွေ အမြဲတမ်း နှလုံးသွင်းတဲ့ စကားတရပ်ကို သတိတရ ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ - အမည်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အညိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို သွေးမြေကျရင် မျိုးချစ်တဲ့ နီရဲတဲ့သွေးတွေပဲ မြေကျရမှာပါ။ အားလုံးဟာ တူညီတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ခံစားကြပြီး တခုထဲသော အမေရိကန် အလံတော်ကိုပဲ အလေးပြုကြတာပါဆိုတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒက်ထရွိုက်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးမှာ မွေးတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေပြင်းတွေတိုက်တတ်တဲ့ နီဘရာစကာ ပြည်နယ်လွင်ပြင်မှာ မွေးတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ညအချိန်မှာ ဒီကောင်းကင်ကြီး တခုထဲကိုပဲ မော့ကြည့်ပြီး တူညီတဲ့ အိမ်မက်တွေ မက်နေကြမှာပါ။ သူတို့ကို ကြီးမြတ်တဲ့ ဘုရားသခင်ကလည်း ခွန်အားတွေပေးနေပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်ပြည်သားများ - အနီးအဝေး အကြီးအသေး ဘယ်လိုမြို့ကြီးမဆို၊ ဘယ်လိုတောတောင် သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေတွေဘက်က မဆို အားလုံးကြားကြရမယ့် စကားကတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တော့မှ လှစ်လျူရှုမခံရတော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသံတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အိမ်မက်တွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သတ္တိမေတ္တာနဲ့ ကောင်းကျိုးထမ်းရွက်မှုတွေဟာလည်း ကျနော်တို့ အားလုံးကို အမြဲတမ်း လမ်းညွှန်သွားနိုင်မှာပါ။အားလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံကြီး ပြန်လည် ခွန်အားကြီးထွားလာအောင် လုပ်ကြပါစို့။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်လည် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင် လုပ်ကြပါစို့။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်လည် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါစို့။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီး ပြန်လည် လုံခြုံအောင် လုပ်ကြပါစို့။အားလုံးစုပေါင်းပြီး ကြီးမြတ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြပါစို့။ကျေးဇူးပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)http://burmese.voanews.com ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဆုံ Posted: 20 Jan 2017 07:30 PM PST ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို တွေ့ဆုံပြီး ညစာ တည်ခင်း ဧည့်ခံငါးနှစ် အတွင်း ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး ခရီးစဉ် အဖြစ် ဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိ နေပါတယ်။သူ့ခရီးစဉ်မှာ အဓိက အားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးတို့ကို အဓိက ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ် ဆိုတာ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနကရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတို့ အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘက်က ပံ့ပိုး ကူညီသွားမယ့်အကြောင်း ဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က အသေအချာ ထပ်မံ ပြောမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ပြောပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ် ပထမနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် လည်းဖြစ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ညစာစားပွဲ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ မတွေ့ခင် မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်က ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်တွေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ပိုမို မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပေမဲ့ ဗြိတိန်ဘက်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရခိုင်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေ ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာ ထုတ်ပြန်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။စနေနေ့ မှာတော့ ဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ရခိုင် ကော်မရှင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး နှစ်ဘက် အသိုင်းအဝိုင်းက ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်စောစောမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် မြန်မာ နိုင်ငံကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။BBC Burmesehttp://www.bbc.com/burmese Donald Trump မိန့်ခွန်း ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဖေါ်ဆောင်နိုင်မလား Posted: 20 Jan 2017 07:29 PM PST အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၅ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းပြောစဉ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၅ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ Donald Trump ရဲ့ မိန့်ခွန်းဟာ - ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည် - မတည် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ သုံးသပ်သူတွေကြားမှာ အမြင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေပါတယ်။ ၄ နှစ်တာ သမ္မတသက် တမ်းအတွင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ့် သူ့ရဲ့ မူဝါဒတွေဟာ ကောင်းပေမဲ့ - တကယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှု အပေါ်မှာလည်း သံသယတွေ ရှိနေကြတာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆက်ပြောပြပါမယ်။ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က Capital လွှတ်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကို - သမ္မတဟောင်းတွေအပြင် - သမ္မတ Trump နဲ့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန် လည်း တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်း - သမ္မတအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကြား တဘက်နဲ့ တဘက် အကြိတ်အနယ် တိုက်ခိုက် ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ - ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ သမ္မတတွေ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့ အခမ်းအနားကိုတော့ - ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးပွဲအဖြစ် အမေရိကန်တွေကြားမှာ သဘောထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း ဒီကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာ သမ္မတ Trump ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းအပေါ်မှာတော့ - အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအကဲခတ်တွေကြား သုံးသပ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိနေတာပါ။ မယ်ရီလန်းပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဗွီအိုအေ အယ်ဒီတာဟောင်း ဦးထွန်းအောင်ကတော့ -" မိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရင်တော့ သူကတော့ သင့်မြတ်ရေးကို လုပ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်မယ့်ပုံတော့ မတွေ့ဘူး။ သူ့အဖွင့်မိန့်ခွန်းကြည့်လိုက်တော့ ပထမ သမ္မတအိုဘားမားကို ချီးကျူးတယ် ဒါပေမဲ့ ရှေ့ဆက်ပြောသွားတော့ အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေက မကောင်းဘူး အခုဒီနေ့ဒီရက်ကနေ စပြီးတော့ အကုန်လုံး ကောင်းအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ သူက ပြောသွားတယ်။ အဲ့တော့ သူပြောသွားတာတွေက လက်တွေ့မှာ တကယ်လုပ်နိုင်မလား။ အဲ့တာ မေးခွန်းရှိတယ်။ "အင်ဒီးယားနားပြည်နယ်က မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကတော့ - သူ့အမြင်ကို အခုလို ပြောပါတယ်။"သူသမ္မတမတက်ခင်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဟာ ကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံ တခုဖြစ်ပြီလို့ မီဒီယာအားလုံးလိုလိုက ပြောကြတယ်။ အဲ့တာကို သူကြိုးစားပြီး အဖတ်ဆည်တဲ့ မိန့်ခွန်းလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တနည်းအားဖြင့် ပြည်တွင်းရေး မိန့်ခွန်းဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံ တကာ ကိစ္စတွေကို ထည့်မပြောပါဘူး။ အမေရိကန်ဦးစားပေး မိန့်ခွန်းကိုပြောတယ်။ တစုတစည်းတည်း ဆိုတဲ့ဟာကို အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် ပြောတော့ ကာ မိန့်ခွန်းအရကတော့ ကောင်းပါတယ်။ လက်တွေ့ ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း ကွဲပြားနေတဲ့အမြင်ကို စိ ရတယ်ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် သူ လေးနှစ် အတွင်းမှာ သူပြောသလို ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ သိပ်တော့ အားမရဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ "ဒါပေမဲ့လည်း ပန်ဆာဗေးနီးပြည်နယ်က သမိုင်းသုတေသီ ဒေါ်ဖြူဖြူကတော့ -"သူ့မိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရတာ အရင်သမ္မတတွေတုန်းက ရော်နယ်ရေဂင် မိန့်ခွန်းဆိုရင်လည်း တကယ့်ကို သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်းပေါ့နော် နောက် သမ္မတ အိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကလည်း အမေရိကားဟာ Blue Sate Red State မဟုတ်ဘူး အကုန်လုံးက အတူတူလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ဒေါနယ်ထရမ့် ကိုကြည့်တော့ အရင် သူကမ်ပိန်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲပြောတော့လေ အန်တီ့အနေနဲ့ သိပ်တော့ အားမရဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူက Electoral vote နဲ့ပဲ နိုင်တာ Popular Vote နဲ့ နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စည်းလုံးဖို့စကားကို သူပြောရမယ်။ "ဒုသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ Mike Pence ယခင်က ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒီးယားနားပြည်နယ်မှာ နေထိုင်သူ Burmese American community institute မှာ အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ရိုဒင်းငါ ကတော့ -"မိန့်ခွန်းကတော့ လှလှပပဖြစ်အောင် ကြိုတင်သေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ ရေးထားတဲ့ ဟာဆိုတော့ အင်မတန် ချောမွေ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် လူတွေ အလုပ်ပြန်ရအောင် နိုင်ငံခြားကို အလုပ်တွေ Outsource မဖြစ်အောင် သူအစကတည်းက ရွေးကောက်ပွဲ စဝင်ကတည်းက သူကြွေးကြော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဒီနေ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲမှာ ဒါကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လည်း လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့လေ။ "ဒါကတော့ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၄၅ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာ သမ္မတ Donald Trump ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းအပေါ် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာအကဲခတ်တွေရဲ့ အမြင်တွေကို ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။VOA Burmese News မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုမရှိလို့ ယန်ဟီးလီပြော Posted: 20 Jan 2017 07:45 AM PST မစ္စ ယန်ဟီးလီက ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းမြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲဖြစ်မှုတွေ အတွင်းမှာလည်း အရပ်သားတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ယန်ဟီးလီက သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ခြုံငုံပြီး ပြည်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှု မရှိသေးဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စ ယန်ဟီးလီဟာ ရန်ကုန်မြို့ Chatrium ဟိုတယ်မှာ သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး လိုင်ဇာဘက်ကို သွားခွင့်မရတဲ့ မစ္စယန်ဟီးလီဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်က ရသေ့တောင်တဝိုက်နဲ့ ဘူးသီးတောင်ထောင် အပါအဝင် ဦးရွှေကျားနဲ့ ဓါးစားကြီးရွာ အစရှိတဲ့ ရွာသုံးလေးရွာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့တယ်လို့ ဒီပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ ဦးရွှေကျားရွာက အမျိုးသမီးတွေ အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာလည်း မစ္စယန်ဟီးလီဘက်က မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုဦးမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။မစ္စ ယန်ဟီးလီက ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းမြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲဖြစ်မှုတွေ အတွင်းမှာလည်း အရပ်သားတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မွန်ပြည်နယ်က ထောင်သားတွေအတွက် ထားရှိတဲ့ အလုပ်ကြမ်းစခန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်ခဲ့တာဟာ ထူးခြားမှု တခုပဲလို့ မစ္စယန်ဟီးလီက ပြောပါတယ်။မစ္စ ယန်ဟီးလီရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ ၁၂ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ရက်နေ့က စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ BBC Burmese ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာခရီးစဉ်စတင် Posted: 20 Jan 2017 07:42 AM PST နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson တွေ့ဆုံ။ ( ဇန်နဝါရီ ၂၀-၂၀၁၇) ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်း က နေပြည်တော် ကို ရောက်ရှိ လာတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ ဒီကနေ့ညနေပိုင်းက ညစာ အတူတူစားရင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြ တာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း လန်ဒန်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွင် ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မပြီးဆုံးသေးပေမဲ့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လလောက်ကစလို့ အစိုးရ တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နှစ်ပေါင်းကြာရှည် ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးအတွက် အပြည့်အ၀ အားပေးသွားမှာ ဖြစ်သလို၊ မြန်မာလူထုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးတဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်အောင် ဆက်လက် ပံ့ပိုးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိနေစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူတွေ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိသလို တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးလိမ့်မယ် လို့လည်း မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး နဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွေကိုလည်း သွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။VOA Burmese News ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့ကိုပါဖို့ ကာချုပ်သဘောတူ Posted: 20 Jan 2017 07:37 AM PST ( တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang နဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့ ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံကြစဉ် ) ဓါတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ဖေ့စ်ဘွတ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့လေးဖွဲ့ထဲက AA ရခိုင်အဖွဲ့၊ TNLA တအာင်းပလောင်အဖွဲ့နဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့တို့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူကြောင်းနဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုကြောင်း တပ်မတော်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တရုတ်နိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တပ်မတော်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံဖို့ ပြောခဲ့တာလို့ TNLA တအာင်းပလောင်အဖွဲ့က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှုးကြီး တာဘုန်းကျော် က ပြောပါတယ်။"တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ၃ ဖွဲ့ကို အရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ အခု ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲ ပါဝင်နိုင်ဖို့ သဘောထားရှိပါတယ်၊ အဲဒီလိုတော့ မစ္စတာဆွန်ကော်ရှန်က ကျနော်တို့ကိုပြောပါတယ်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တော့ပြောတာက ကျနော်တို့ ၃ဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ သဘောတူပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အဲလိုပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးလည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ တွေ့ဆုံစေချင်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အဲလိုပဲ ကျနော်တို့ကို တွေ့ဆုံညှိုနှိုင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့စေချင်တယ် ))တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့မှာ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဆွန်ကော်ရှန် နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၎ ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြန်စဖို့အတွက် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး တာဘုန်းကျော် က ပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူတယ်လို့ ပြောဆိုထားပေမယ့် ဘယ်လို ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ တပ်မတော်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မပြောခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ၀ အဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်ဖို့ တောင်းဆိုထားပေမယ့် တပ်မတော်ဘက်က ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ အဲဒီအချက်ကို ပြေလည်ဖို့ ထပ်မံဆွေးနွေးရဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ အရင် အစိုးရလက်ထက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရာမှာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူ ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်မင်းတို့နဲ့ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီး တာဘုန်းကျော်က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိကြောင်းနဲ့ အစိုးရတပ်မတော်ဘက်က တိုင်းရင်းသားဒေတွေမှာ မြေပြင်သာမက ဝေဟင်ကပါ လေယာဉ်တွေနဲ့ တရစပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်း ကို မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA က ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် အစည်းအဝေးရှိတဲ့အတွက် ဖြေကြားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်က အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေကတော့ အစိုးရဘက်ကတာဝန်ယူနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးဖွင့်ထားတယ်၊ ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသာ ပြောလို့ရကြောင်းနဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တွေ့မယ်ဆိုတာကိုတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။RFA Burmesehttps://www.facebook.com/rfaburmese YBSစနစ်အတွက် ကားအစီးရေ ၁၀၀၀နီးပါး ထပ်မံ ၀ယ်ယူရန်ရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဆို Posted: 20 Jan 2017 07:36 AM PST ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်နေ့က ပြောင်းလဲပြေးဆွဲခဲ့သော YBSယာဉ်များအား တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်နေ့က ပြောင်းလဲပြေးဆွဲခဲ့သော YBSစနစ်အတွက် ကားအစီးရေ ၁၀၀၀နီးပါး ထပ်မံဝယ်ယူရန် အစီစဉ်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ''မနေ့က အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယာဉ်အစီးရေ ၁ဝဝဝ လောက်ကို ဝန်ကြီးချုပ်က ဝယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ လောလောလတ်လတ် လက်ရှိတင်သွင်းပြီးသားကုမ္ပဏီတွေကလည်း ကားတွေထပ်ဝယ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါက မလဲမနေရ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ပါ။ ရေရှည်အတွက်ကတော့ ကားအစီးရေ တော်တော်များများကိုအသစ်တွေနဲ့ ပြန်လဲသွားမှာပါ'' ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောကြားသည်။ ယခုလကုန်ပိုင်းမှစ၍ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် နောက်ဆုံးထားကာ ယာဉ်အသစ် အစီးရေ ၄ဝဝ နီးပါး ထည့်သွင်းပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသည့်အပြင် ခရီးသုံးဆင့်ဖြင့် နေ့စဉ်ခရီးသွားနေရသူများအတွက် ယာဉ်လမ်းကြောင်းသစ်များ ဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ယာဉ်အသစ်များ ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် ၇ဝ ဘီလီယံခန့် အသုံးပြုထားသော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေတွင် ယာဉ်အားလုံးကို အသစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အခက် အခဲများရှိနေ၍ ယာဉ်အဟောင်းများ ဆက်လက် သုံးစွဲနေရသည်။ လက်ရှိ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှ ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၆၁ လိုင်း ယာဉ်အစီးရေ နှစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲခဲ့သော ရန်ကုန်ဘတ်စ်ဆားဗစ်သည် ယခုအခါ ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၇၁ လိုင်း ယာဉ်အစီးရေ သုံးထောင်ဖြင့် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်။(Xinhua)http://xinhuamyanmar.com မြန်မာနိုင်ငံသား ငါးဦးကို သတ်ဖြတ်၍ မီးရှို့ခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားကို မော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ် Posted: 20 Jan 2017 07:36 AM PST ဒေါက်တာ ဆိုဖာ့ (ခ) နိုင်အောင်မင်းမော်လမြိုင်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀။ ။မော်လမြိုင်မြို့၊ ရာမညဟိုတယ်တွင် ဖမ်းမိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသား ငါးဦးကို သတ်ဖြတ်၍ မီးရှို့ခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း မုပွန်နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဝင်းဦးက ပြောသည်။ထိုင်းနိုင်ငံသား နှလုံးနှင့် ဆီချိုအထူးကုသမားတော် ဒေါက်တာ ဆိုဖာ့ (ခ) နိုင်အောင်မင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းက ၎င်းခြံ၌ အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသား ခြံအလုပ်သမား ငါးဦးကို သတ်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့ပြီး ထိုင်းတရားရုံးမှ အာမခံပေးထားရာမှ ထွက်တိမ်းရှောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းတရားရုံး၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က တစ်သက်တစ်ကျွန်း အမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့တရားခံပြေး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ ဆိုဖာ့ကို မုပွန်နယ်မြေရဲစခန်းမှ လဝက အက်ဥပဒေ ၁၃ (၁) အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားရာမှ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။သတင်း - ခေတ်မင်းHinthar Media Corporationhttps://www.facebook.com/hintharmediacorporation/ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ နှစ်ဦး အကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန် Posted: 20 Jan 2017 07:35 AM PST တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဒီဒီနောင်လတ်နဲ့ လန်ဂျော်ဂမ်ဆိုင်းတို့ကို တွေ့ရစဉ် ။ ဓါတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုးမြို့နယ် ဥက္ကဌ ဦးဒီဒီနောင်လတ်နဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ ဦးလန်ဂျော်ဂမ်ဆိုင်း တို့ကို မုံးကိုးမြို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကို ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ စွပ်စွဲချက်တွေအတိုင်းဆိုရင် အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို ဖမ်းဆီးရမယ့် သဘောဖြစ်နေပြီး အဲဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှသာ ဖြေရှင်းချက်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် KBC အတွင်းရေးမှူး ဦးခလမ်ဆမ်ဆွန် ကပြောပါတယ်။"အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်သူမှမလွတ်ကင်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့သူဆိုတော့ ဖမ်းမယ်ဆိုရင် အားလုံးကိုဖမ်းဖို့ပဲရှိတာပေါ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆွေမျိုး သားချင်းတွေ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ဆက်စပ်နေကြတာကို တရားရုံးကိုရောက်မှပဲ ဒါတွေကို ဖြေရှင်း လို့ရမှာပေါ့"သူတို့ နှစ်ဦးဟာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကို ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့တာ၊ သတင်းပေးတာ၊ လူသစ် စုဆောင်းပေးတာ၊ မဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်တာတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။မုံးကိုးမြို့နယ် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်း ဥက္ကဌ ဦးဒီဒီနောင်လတ်ဟာ အရင်က မုံးကိုးကာကွယ်ရေးတပ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးခဲ့ပြီး KIA တပ်မဟာ ၆ ရဲ့ ဆုတောင်းပွဲ၊ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲတွေကို တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် KIA တပ်ဖွဲ့ ၊ MNDAA တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးပတ်သက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို သတင်းပေးပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ဆောင်တယ်လို့ တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် သင်းအုပ်ဆရာ လန်ဂျော်ဂမ်ဆိုင်း ဟာလည်း KIA တပ်ဖွဲ့အတွက် သတင်းပေးတာ၊ လူသစ်စုဆောင်းပေး တာ၊ စက်သုံးဆီတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ကူညီတယ်ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက မုံးကိုးမြို့ကို သတင်းသွားယူတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို လိုက်လံပို့ဆောင်အပြီးမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်လ နီးပါးအကြာမှာမှ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး ထားကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင် ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေထံ လွဲပြောင်းပေးအပ်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။RFA Burmesehttp://www.rfa.org/burmese YBS လိုင်း တိုင်ကြားစာ ၁ဝဝဝ ရှိနေ Posted: 20 Jan 2017 07:33 AM PST ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘက်စ်ကားလိုင်းစနစ်သစ်တွေ စတင်ပြေးဆွဲတဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ လေးရက်တာအတွင်း YBS ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားမှု ၁ဝဝဝ ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ YBS ကွပ်ကဲရေးဗဟိုက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင် က ပြောပါတယ်။အဲဒီတိုင်ကြားချက်တွေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင် က ပြောပါတယ်။"တိုင်ကြားမှုပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်လောက်လာပါတယ်။ ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ ကျနော်တို့က သေချာမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျရင် အစိုးရကို တင်ပြပါတယ်။ ဒါမှ အဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေရှိတာကို။ ခရီးသွားလုပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတင်မဟုတ်ဘူး။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသမားတွေရှိတယ်။ သူတို့နဲ့လည်း ကျနော်တို့တွေ့ပါတယ်။ တွေ့ပြီးတဲ့ ခါကျတော့သူတို့ဘက်မှာလည်း အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ရင် ပြောမယ်။ အစိုးရက လုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့က ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။"တိုင်ကြားမှုတွေထဲမှာ ခရီးသည်အင်အားနဲ့ ကားအစီးရေ မလုံလောက်တာတွေ၊ မှတ်တိုင်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်တာတွေ၊ ယာဉ်နောက်လိုက်တွေရဲ့ မောက်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ၊ ယာဉ်စီးခ ပိုမိုတောင်းခံတာတွေ၊ လိုရာခရီးကိုရောက်ဖို့ အဆင့်ဆင့်ကားပြောင်းစီးရတာတွေနဲ့ လိုင်းကားတွေ တစ်စီးနဲ့တစ်စီးကြား အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရတာတွေကို တိုင်တန်းတာများတယ်လို့ ပြောပါတယ်။YBS စနစ် စတင်ပြောင်းလဲတဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က တိုင်တန်းမှု ၂၀၀ကျော်ရှိပြီး ဒုတိယနေ့က ၃၀၀ ကျော်၊ တတိယနေ့နဲ့ စတုတ္တနေ့တွေမှာ ၂၀၀ ကျော်စီရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး လုပ်အားပေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတော့မှာ မဟုတ်တာကြောင့် YBS ယာဉ်လိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်တန်းလိုသူတွေဟာ YBS ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသာ တိုင်ကြားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။RFA Burmesehttps://www.facebook.com/rfaburmese/ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် YBS တံဆိပ်ကပ် အခမဲ့ဆိုပြီး ပြေးဆွဲတဲ့ Dyna ယာဉ် အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက် Posted: 20 Jan 2017 07:32 AM PST ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် YBS တံဆိပ်ကပ်ပြီး အခမဲ့ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ Dyna ယာဉ်ဟာ အပြင်းမောင်းတဲ့အတွက် သာကေမြို့နယ်မှာ ဘေးတိုက်တိမ်းမှောက်ပြီး ခရီးသည် (၁၅)ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သာကေတမြို့နယ် ထူပါရုံမှတ်တိုင်မှာ ဒီနေ့ညနေ (၆)နာရီကျော်လောက်က တိမ်းမှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီဒိုင်နာယာဉ်ဟာ သာကေတကနေ စံပြဈေးကို (၄၉)သာရေး၊ နာရေးမိသားစုက အခမဲ့ဆိုပြီး ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီ Dyna ယာဉ်ဟာ အရင်က မထသ (၄၉)နံပါတ်နဲ့ ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ ယာဉ်လိုင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း သာကေတမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းက5Plus ကိုပြောပါတယ်။ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူကို သာကေတမြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူထားပေမယ့် စပယ်ယာဖြစ်သူကတော့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို YBS တံဆိပ်တွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယူပြီး ကားတွေမှာကပ်ကာ အခမဲ့ဆိုပြီး ပြေးဆွဲနေတဲ့ ကားတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိရပေမယ့် အခု Dyna ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကတော့ ကြီးမားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ YBS တံဆိပ်တွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြေးဆွဲနေတဲ့အပေါ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရေးယူနိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြထားတယ်လို့လည်း ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ဓာတ်ပုံ- အောင်အောင်ကျော်5 Plus Newshttps://www.facebook.com/5plusnews/ မက္ကဆီကို မူးယစ် ရာဇာ အယ်လ် ချာပို ဂတ်ဇ်မန်းကို အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ Posted: 20 Jan 2017 07:32 AM PST မူးယစ်ခေါင်းဆောင် အယ်ချာပိုအား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ် (ဆင်ဟွာ) မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) မူးယစ်ရာဇာ အယ်လ်ချာပ်ု ခေါ် Joaquin Guzman Loera ကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မက္ကဆီကို အစိုးရက ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်၌ ကြေညာလိုက်သည်။၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလက မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံးတစ်ခုမှ ဂတ်ဇ်မန်း၏ နေထိုင်ခွင့်အား ပယ်ချလိုက်ပြီးနောက် ယခုလို ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားထားသည်။ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး မူးယစ် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် အယ်လ်ချာပို ဂတ်ဇ်မန်းသည် မက္ကဆီကို နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အထူး တင်းကျပ်စွာချထားသည့် "Plateau" ဖယ်ဒရယ် အကျဉ်းထောင်မှ မြေအောက် လိုဏ်ခေါင်းတူးကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိ်ုဘာလတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းကာ စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံက ၎င်းအား လွှဲပြောင်းပေးရန် မက္ကဆီကို အစိုးရထံ တောင်းဆိုထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။(Xinhua)http://xinhuamyanmar.com ရပ်စောက်မှာရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီလိုနေ Posted: 20 Jan 2017 07:31 AM PST ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းရှူးမြို့နယ် ဟိုက်ပါကျေးရွာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ခိုလှုံနေသူတွေကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Kan Thar/RFAရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းရှုးနဲ့ ကျေးသီးမြို့နယ်ဘက်ကနေ ရပ်စောက်မြို့မှာရောက်နေတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော်အတွက် စားဝတ်နေရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနေတဲ့ ရပ်စောက်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးခိုင်ညီညီကျော် က ပြောပါတယ်။အဲဒီ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရဘက်က ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေပြီး လိုအပ်နေတဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စတာတွေကို NLD ဘက်ကလည်း သွားရောက်ကူညီပေးဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ ဦးခိုင်ညီညီကျော် က ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့မှ နယ်လုံဝန်ကြီးနဲ့ စီးပွားစီမံဝန်ကြီးပေါ့လေ။ သူတို့က သွားပြီးတော့မှ ထောက်ပံ့မှုလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားတာရှိတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ မြို့နယ် NLD ရုံးအနေနဲ့ကလည်း ကျနော်တို့ သွားပြီးတော့မှ သူတို့ကို လိုအပ်တာလေးတွေ ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ အစီစဉ်ဆွဲနေတာတွေ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ၊ စားဝတ်နေရေးပါပဲ။ အဓိကကတော့လေ။ တောင်သူလယ်သမား မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားစီးပွားရေးလည်း သူတို့မလုပ်တတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ လောလောဆယ် ဒီမှာလာပြီးတော့ ခိုလှုံတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား ဒါပါပဲ။"အဲဒီ ဒုက္ခသည်တွေဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက တပ်သားစုဆောင်းတာတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာတာလို့ ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အဲဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာ ရပ်စောက်မြို့ မားဘဲကျေးရွာအုပ်စု ရေဖြူကျေးရွာက နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တအာင်းတပ်မတော် TNLA၊ အပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) နဲ့ တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။RFA Burmesehttp://www.rfa.org/burmese မန္တလေးမြို့ တွင် အမျိူးသမီးတစ်ဦးကို ဓါးဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်ပြီး၊ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မီးရှို့သတ်မှု ဖြစ်ပွား Posted: 20 Jan 2017 07:30 AM PST မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ထိန်ကုန်းရွာမကြီး အကွက်( ၅၈၉ )မေဇင်သိန်းလမ်းကြား အိမ်ရှင် ဦးတင်ထွန်းဝင်း နေအိမ်တွင် ဇန်န၀ါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီ၄၅မိနစ်ခန့်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဓါးဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်ပြီး၊ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မီးရှို့သတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။အဆိုပါ နေအိမ် အိပ်ခန်းအတွင်း အိမ်ရှင်ဇနီးဖြစ်သူ အသက် ၃၅နှစ် မနန်းခင်ထွေးဝင်း ၉/မရမ (နိုင်)၀၉၀၀၃၂ အား ဓါးဖြင့် အပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီး အဝတ်အစားထည့် ပလပ်စတစ်ပုံးအတွင်း ခွေခေါက်ထည့်ထားပြီး ၃နှစ်၂လ အရွယ် မနန်းဝင်းရွှေရည်မှုံ ကို ခရီးဆောင်အိတ်အတွင်း ထည့်ကာ မီးရှို့သတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်အိမ်တည်းနေသူ လူသတ်တရားခံ သံသယရှိသူမှာ အသတ်​ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ အမဖြစ်​သူ၏ သမီးကြီး​ယောကျာ်းဖြစ်​ပြီး အိမ်​​ပေါ်​ခေါ်တင်​ထားတဲ့သူဖြစ်​​ကြောင်း သိရပြီး အဆင့်မြင့်ရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။အမျိူးသမီးတစ်ဦး ကို ဓါးဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီး ကလေးငယ်တစ်ဦးမီးရှို့သူ လူသတ်တရားခံ ဝန်ခံသွားပါပြီး ၊ cctv မှတ်တမ်းများအရ သေဆုံးသူ၏ တူမယောက်ကျား အသက် ၂၀ခန့် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား ဟုဆိုပါသည်။သတင်း - ShweMannဓါတ်ပုံ - Ko A Tar You are subscribed to email updates from Dawnmanhon.To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. Email delivery powered by Google Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ရေသားသူ
မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
ရေးထားသော Blogs များ
ကြှနျုပျဇျောဂြီဖွငျ့ယူနီကုတျဖွငျ့ဇျောဂြီကီးဘုတျဖွငျ့ ယူနီကုတျ ရေးမညျ။ရွှေဟင်္သာဒီမိုကရက်တစ်ဧရာဝတီဗွီအိုအေဧရာဝတီဘလော့ဒီမိုးဝေယံBurma News Internationalကေအိုင်စီမီဒီယာကွန်ယက်အာရကန်တိုင်းမ်းစ်မောက္ခပညာရေးလွတ်လတ်သောအာရှအသံမဇ္ဈိမရှမ်းသံတော်ဆင့်ပြည်ပရခိုင်သတင်းဌာနသစ်ထူးလွင်ရွှေမြန်မာ
OppositEyE သင်ပြမှုပုံစံ မလိုဘူးတဲ့လား ဇော်ဂျီနှင့် ဦးယူနီ ဆရာများ၏ ရင်ဖွင့်သံ ရပ်ဆိုင်းခံရသည့် အဆောက်အဦများ၏ ဆံ...
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw)
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw) သီလရှင်တစ်ပါးကို ဓါးထောက်ခြိမ်းချောက်၍ သားမယားပြုကျင့်ကျူးလွန်ခဲ့သူ တရားခံပြေးနှစ်ဦ...
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw) - "ဝေ ဖန် မှု နဲ့ ကော လ ဟာ လ တွေ အ တွက် ခေါင်း ထဲ မှာ နေ ရာ မရှိပါဘူး" ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း..!
ဖိုးသူတော် နေ့စဉ်သတင်း (Pho Thu Taw) - "ဝေ ဖန် မှု နဲ့ ကော လ ဟာ လ တွေ အ တွက် ခေါင်း ထဲ မှာ နေ ရာ မရှိပါဘူး" ဆိုတဲ့ ဝိုင်...
ရခိုင် web site များ
Paw Htun Aung. Picture Window template. Powered by Blogger.